ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုနည်းမှန်ကန်ရဲ့လား……… - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Corona Virus » COVID-19 » ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုနည်းမှန်ကန်ရဲ့လား………
ရောဂါတွေက ဘယ်လောက်ပြင်းပြင်း ပြောင်းလဲမသွားတဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ ကာကွယ်နည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ လက်ဆေး တာပါ။ လက်ဆေးခြင်းက ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ရာမှာ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးပါ။ လက်ဆေးတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး ဆေးတာရှိသလို ရေမလိုလက်သန့်ဆေးတွေကို သုံးပြီး ဆေးတာလည်း ရှိပါတယ်။
လက်ဆေးတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးကတော့ ရေနဲ့ဆပ်ပြာကိုသုံးပြီး စက္ကန့် ၂၀ ကြာအောင် ဆေးကြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် ရေအလွယ်တကူမရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ ရောဂါပိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ ရေမလို လက်သန့် ဆေးရည်ကို အားကိုးရပြီပေါ့။
အခုလိုမျိုး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ COVID-19 ကိုကာကွယ်နေရချိန်မှာ လက်ကို ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည် သုံးပြီး ဆေးကြောသန့်စင်မှုတွေ လုပ်ကြတယ်ဟုတ်။ ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါနည်းစနစ်မှန်မှလည်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကင်းတော့မှာ ပေါ့။ ဒီတော့ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်ကို နည်းစနစ်မှန်မှန်လေး အသုံးပြုကြရအောင်လား…………
ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည် ဆိုတာ………….
ရေအလွယ်တကူမရရှိတဲ့ နေရာမှာ လက်မှာကပ်တွယ်နေတဲ့ ပိုးမွှားတွေကို သန့်စင်ဖို့ အသုံးပြုကြတဲ့ လက်ဆေးဂျယ်လ် တစ်မျိုးပါ။ ရေလောက်မကျဲဘဲ အရမ်းစေးကပ်နေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါပိုးတွေကိုသေစေဖို့ အယ်လ်ကိုဟော နဲ့ အခြား အနံ့အရောင်စတာတွေ ထည့်သွင်းပြုလုပ်ထားတာပါ။
ပိုးမွှားတွေကို သေစေဖို့ဆိုရင် ရေမလို လက်သန့်ဆေးမှာ အယ်လ်ကိုဟော အနည်းဆုံး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါရပါမယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ထိရောက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ လက်သန့်ဆေး ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် အယ်လ်ကိုဟော ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးပါ။
ဘယ်အချိန်မှာ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည် သုံးမလဲ….
ရေအလွယ်တကူမရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာအသုံးပြုပါ။ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်သုံးမယ်ဆိုရင် လက်ဖမိုး၊ လက်ဖဝါး၊ လက်ချောင်းကြား၊ လက်မ၊ လက်သည်း၊ လက်ထိပ်လေးတွေနဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ပါမကျန် သေချာလေး ပွတ်တိုက်ဆေးရပါမယ်။
ပြီးရင် ခြောက်သွားအောင်ထားပြီးမှ ကိုင်တွယ်လိုတဲ့ အရာတွေကို ကိုယ်တွယ်ရပါမယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ရောဂါပိုး တွေကို မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ ပြီးရင်လက်ကို ရေနဲ့ဆေးချလိုက်တာမျိုး၊ wet tissue နဲ့ သုတ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
• ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည်ကို ရေနဲ့ဆပ်ပြာနေရာမှာ အစားထိုးပြီး မသုံးသင့်ပါဘူး။
• လက်တွေက အရမ်းကို ညစ်ပတ်ပေရေနေတာမျိုးဆိုရင် (မြင်သာအောင်ပြောရရင် ရွှံ့တွေနယ်ထားတဲ့ လက်ကို ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်နဲ့တော့ မသန့်စင် သင့်ဘူးလေ)
• ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပေကျံနေတဲ့အခါမျိုးမှာ
• ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ခြေ အရမ်းမြင့်နေတဲ့အခါမျိုး တွေမှာ ရေနဲ့ဆပ်ပြာကိုပဲ သုံးပြီး ဆေးသင့်ပါတယ်။
ထိရောက်မှုက လက်သန့်ဆေးရည် တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူနိုင်ပါဘူး။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ကွာသလို ထိရောက်မှုလည်း ကွာခြားပါ တယ်။ ထိရောက်မှုရှိစေဖို့ဆိုရင် အနည်းဆုံး အယ်လ်ကိုဟော ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါတာကို ရွေးပါ။
• အရင်ဆုံး လက်ဖဝါးထဲကို လက်သန့်ဆေးရည်ကို ထည့်လိုက်ပါ။
• ပြီးရင် လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ကို ပွတ်ပါ။
• လက်ချောင်းကြားတွေကို ပွတ်ပါ။
• လက်ထိပ်လေးတွေ၊ လက်သည်းလေးတွေကို ပွတ်ပါ။
• လက်မကို ပွတ်ပါ။
• ပြီးရင် လက်ဖမိုးကိုပွတ်ပါ။
• နောက်ဆုံး လက်ကောက်ဝတ်ကိုပွတ်ပါ။
အရမ်းငယ်သေးတဲ့ ဘေဘီလေးတွေကိုတော့ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ ဆေးကြောပေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံက
• လက်ခဏခဏမဆေးရအောင် အထောက်အပံ့ပေးတယ်
• ရောဂါပိုးတွေကို အမြန်ဆုံး သုတ်သင်ပေးနိုင်တယ်
• ရောဂါပိုးတွေ ကပ်တွယ်ခံရနိုင်ခြေ လျှော့ချပေးတယ်
• ရေနဲ့ဆပ်ပြာအသုံးပြု ဆေးကြောမှုကြောင့် လက်အသားအရေထိခိုက်တာကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။
ကဲ..ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည်ကို နည်းစနစ်မှန်မှန် အသုံးပြုလို့ ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ကြရအောင်လား…
လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ဆေးတာနဲ့ ရေမလိုလက်သန့်ဆေးရည်သုံးတာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ ။ ။
အိမ်လုပ် လက်သန့်ဆေးရည် တွေက ထိရောက်ရဲ့လား
How to Properly Use Hand Sanitizer https://www.verywellhealth.com/should-you-use-hand-sanitizer-770727 Accessed Date 25 March 2020
How It Works: Cleaning Hands with Waterless Hand Sanitizer https://www.health.state.mn.us/people/handhygiene/clean/howrub.html Accessed Date 25 March 2020